၁၀ လိုချင်သလား၊ ကူညီပေးပါတဲ့.. | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Community & Society » ၁၀ လိုချင်သလား၊ ကူညီပေးပါတဲ့..
၁၀ လိုချင်သလား၊ ကူညီပေးပါတဲ့..
Posted by kai on Dec 21, 2009 in Community & Society, Health & Fitness, News |0comments
ဟုတ်ပါတယ်၊ ကူညီပေးပါတဲ့၊ မြန်မာတွေလည်း ပါစေချင်ပါတယ်။ ဆေးပညာဆိုင်ရာ စစ်တမ်း- ဆာဗေးဖြစ်နေလို့ ပါ။
အခုလို စစ်တမ်းတွေကောက်ယူခံရတာစိမ်းတဲ့ မြန်မာတွေ .. စာရင်းထဲမပါမရှိဖြစ်နေကြတာမို့မြန်မာဟာ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာလူသိန်းဂဏ္ဍန်းရှိရက်နဲ့ သေးသိမ်လှပါတယ်..။
အခုတော့ …အခု အောက်က လင့်ကနေ ဆိုင်ရာဝက်ဘ်ဆိုက်သွားကြည့်ပီး ကူညီလိုက်ပေးကြပါလို့ ..။
ဒေါ်လာ ၁၀ဖိုး လက်ဆောင်ကဒ်ရမယ်ဆိုပါတယ်။ အမျိုးသမီးများအတွက်သာ ဖြစ်ပါတယ်..။
ကုသိုလ်လည်းရ ဟမ်ဘာဂါတလုံးလောက်လည်း ကိုက်ရမှာပေါ့နော.. ၁၀ ဆိုတောလေ…အောက်မှာ သူတို့ ပို့ ထားတဲ့ စာလေး ဖြတ်တောက်တင်ထားပါတယ်…။တော်တော်ရှည်တာမို့ ပါ။
we believe that female members in your community would like to participate in and will benefit from participating in the following NIH-funded study (R01 study 1R01NR010568-01). Dr. Im is conducting an Internet study investigating attitudes towards physical activity among middle-aged women (40-60 Y/O) of multiple ethnic groups. Asian-American women’s participation is an integral part of our study.
We are cordially inviting you to help us announce this study by posting the following link (http://mapa.nur.utexas.edu/MAPA/) on your website or forwarding this message to your members. We haveatemplate for the announcement at the bottom of this message.
I really appreciate your help. If an announcement fee is required, please provide us with related information.
The study is an Internet survey,aquestionnaire that asks participants about their physical activity. Each participant will be reimbursed withagift certificate of USD$10 per Internet survey.
The survey will begin by asking each participantaseries of eligibility questions. We are looking for participants with specific characteristics. If the sampling quota foraspecific group is reached, the participant will receiveamessage that states so…